Minisitry ny fizahan-tany: hampiditra ny pasipaoro COVID i Espana amin'ny fahavaratra
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Minisitry ny fizahan-tany: hampiditra ny pasipaoro COVID i Espana amin'ny fahavaratra
Ny minisitry ny fizahantany any Espana, Reyes Maroto
Mbola sarotra ny mamaritra ny daty marina hisehoan'ny pasipaoro
Espana hamoaka ny antontan-taratasy fidirana vaovao ho an'ireo mpitsidika vahiny
Alohan'ny hampiharana ny drafitra 'COVID Passport' dia farafaharatsiny 70 isanjaton'ny Espaniola no mila vaksiny
COVID Passport dia ilaina raha te hiditra any Espana
EspainaNy minisitry ny fizahan-tany, Reyes Maroto, dia nilaza fa ny volana jona dia tokony hampidirina ireo kara-panondro vaksinina, na «Certificat Green» na «COVID Passports», izay ahafahan'ny mpizahatany vahiny miditra ao amin'ny firenena.
Alohan'ny hampiharana ny drafitra 'COVID Passport' dia farafaharatsiny 70 isanjaton'ny Espaniola no mila vaksiny. Na izany aza, io isa io dia azo ahena ho 30-40 isan-jato, na dia manohitra izany aza ny dokotera. Miankina amin'ny famatsiana ny vaksinin'ny AstraZeneca ao amin'ny firenena ny hafainganan'ny vaksiny nasionaly, ka mbola sarotra ny mamaritra ny daty marina hisehoan'ny pasipaoro.
Ny manampahefana ao amin'ny Nosy Balearic dia nanolo-kevitra ho voalohany hanandrana ny tetika fanamoriana any amin'ny faritra misy azy ireo, saingy nolavin'i Maroto izany. Tiany hampahafantarina manerana ny firenena miaraka ny pasipaoro.
Ny fironana hanokafana ny fizahantany manerantany napetraka taorian'ny nandatsanan'i Etazonia sarontava sy fisintahana ara-batana ho an'ny olona vita vaksiny